One Myanmar - Home
about | languages |
မြေမျက်နှင်ပြင်အကျယ်အ၀န်း ၆၇၆ ၅၇၈ ကီလိုမီတာစတုရန်းရှိသည့်မြန်မာနိုင်ငံသည်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်းဆွယ် တွင်ဒုတိယအကြီးမားဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ တရုပ်နိုင်ငံ၊အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ် လျက်ရှိပြီး၊ အိန္ဒိယတိုက်ငယ်နှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိသည့်မြန်မာနိုင်ငံသည် အာရှတိုက်သို့သွားရာလမ်းဆုံတွင်တည်ရှိပါ သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏စစ်မှန်သောအထိမ်းအမှတ်လက္ခဏာနှင့်ပင်မကျောရိုးဖြစ်သော ဧရာဝတီမြစ်သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏မြောက် ဖက်မှတောင်ဖက်ဆီသို့စီးဆင်းလျက်ရှိပြီး ၂၁၇၀ ကီလိုမီတာခန့်ရှည်လျားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တပေါင်းတစည်းတည်းဖြစ်ခြင်းနှင့် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံစုဝေးနေထိုင်ခြင်းဆိုသည့်စကားလုံးများ၏အ တွင်းသဘောမှာခက်ခဲနက်နဲသည်ဟုဆိုသည်ထက်ပင်ပို၍နက်ရှိုင်းသောအဓိပ္ပါယ်ရှိနေပါသည်။ ဒေသအသီးသီး၏မြေ မျက်နှာပြင်များအပါအ၀င်နိုင်ငံရေးအရပါတပေါင်းတစည်းတည်းဖြစ်ကြောင်းသိမြင်နိုင်လောက်သည့်ကြန်အင်္ဂါလက္ခဏာ များဖြင့် တပေါင်းတစည်းတည်းဖြစ်သောနိုင်ငံအဖြစ်ချယ်မှုန်းရန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသောမြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေအနေမှာပိုမို ရှုပ်ထွေးလျက်ရှိပါသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ကောက်ယူခဲ့သောသန်းခေါင်စာရင်းအရမြန်မာနိုင်ငံတွင်တရားဝင်နေထိုင်လျှက်ရှိသူလူ ဦးရေမှာ ၅၁.၅ သန်းရှိပြီး အများစုမှာမြန်မာလူမျိုးများဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာတိုင်းရင်းသားအုပ်စုသည် ရန်ကုန်၊ဧရာဝတီ၊ပဲခူး၊မန္တလေး၊စစ်ကိုင်း၊မကွေးနှင့် တနင်္သာရီဒေသများရှိအဓိကကျ သောမြေပြန့်ဒေသများတွင်နေထိုင်ကြပြီး လူဦးရေစာရင်းဇယားအရသာမကနိုင်ငံရေးအရပါနိုင်ငံအပေါ်တွင်လွှမ်းမိုးမှုရှိ ပါသည်။မြန်မာတိုင်းရင်းသားများနေထိုင်သည့်ဒေသ ၇ ခု၏အထက်ပိုင်းဒေသတွင်တိုင်းရင်းသားပြည်နယ် များဟုခေါ် ဆိုသည့် “ကချင်” “ရှမ်း” “ကယား” “ကရင်” “မွန်” “ချင်း” “ရခိုင်” စသည့်လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအ များစု၏ဇာတိမြေဖြစ်သောပြည်နယ်များတည်ရှိနေပါသည်။ ၎င်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများသည်မြန်မာနိုင်ငံရှိစုစုပေါင်းလူ ဦးရေ၏ သုံးပုံတစ်ပုံခန့်ရှိကာ အများစုမှာတောင်တန်းဒေသများတွင်နေထိုင်ကြပြီး၊ အဓိကအားဖြင့်နယ်စပ်ဒေသများရှိ တောင်တန်းဒေသများတွင်နေထိုင်ကြပါသည်။ ၎င်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနေထိုင်ရာဒေသများမှာသဘာဝသယံဇာတ များပေါကြွယ်ဝသဖြင့် လူအများကစိတ်ဝင်စားကြပါသည်။ ထိုတိုင်းရင်းလူမျိုးများ၏ ဘာသာစကား၊ ယုံကြည်မှု၊ ဓလေ့ ထုံးစံ၊ စာရိတ္တရေးရာအမှားအမှန်ခွဲခြားမှုစံနှုန်းများနှင့်ဘ၀တွင်အရေးအကြီးဆုံးအရာများနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာလူမျိုးနှင့် ကွဲပြားခြားနားပြီး အစိုးရအစဉ်အဆက်ကထိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအားတပေါင်းတစည်းတည်းဖြစ်စေရန်အင်အားသုံး ၍ကြိုးပမ်းခဲ့ပါသည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံထက်အနည်းငယ်ပို၍ကြီးသောမြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ၁၃၅ စုရှိကြောင်းလက်ရှိအစိုးရမှတ ရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားပါသည်။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနှင့်ပတ်သက်၍ ၁၉၄၈ ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိချိန်မှစတင်၍ဗဟိုအစိုးရကနိုင်ငံတော် ကိုတပေါင်းတစည်းတည်းဖြစ်စေရန်အတွက် ဖြစ်နိုင်လျှင်နိုင်ငံရေးအရသော်လည်းကောင်း တော်လှန်ပုံကန်မှုများနှင့်ကြုံ တွေ့ရလျှင် စစ်ရေးအရသော်လည်းကောင်း အစဉ်အမြဲကြိုးပမ်းခဲ့ပါသည်။
အချို့သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ - အထူးသဖြင့်မြန်မာလူမျိုးများကဲ့သို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသက်ဝင်ယုံကြည်သူများက ပြည်မနှင့်ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်လိုလားကြပါသည်။ ကချင်လူမျိုးစသည်ကဲ့သို့ သောအခြားတိုင်းရင်းသားအုပ်စုများနှင့်ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်သောကြောင့် လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးနှစ်ပေါင်း ၇၀ ခန့် ကြာမြင့်သည့်တိုင်အောင်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုဆောင်ရွက်နေရဆဲဖြစ်ပါသည်။
ထိုရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် မတည်ငြိမ်မှုဖြစ်နိုင်ခြေများကြောင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကိစ္စသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏အနာဂတ်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမည့်အချက်ဖြစ်လာပါသည်။ စင်စစ်သော်ကားတပ်မတော်မှမြန်မာနိုင်ငံကိုတပေါင်းတစည်းတည်း ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် မြန်မာလူမျိုးများလွှမ်းမိုးထားသောဗဟိုဦးစီးစနစ်ကိုကျေးဇူးတင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ လက်ရှိအစိုးရကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးကိစ္စကို တပ်မတော်ဖြင့်ဖိအားပေးမှုအသုံးမပြုဘဲကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။ မကြာမီကပေါ်ပေါက်လာသောဒီမိုကရေစီစနစ်အတွင်း အစိုးရသည်နိုင်ငံတော်ပုံစံသစ်ကိုရှာဖွေရတော့မည် ဖြစ်ပြီး ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများပါဝင်လာသည့် - တပေါင်းတစည်းတည်းဖြစ်သော - သို့သော်တစ်သားတည်းမဟုတ် သောနိုင်ငံတော်မှာ ထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
The first difficulty when talking about this country, is to give itaname. Indeed "Burma" in French, is not the official name of the country anymore since June the 18th 1989.. The Burmese military regime promulgated the 15/89 Law to "Burmanize" the names of the cities, rivers, mountains and administrative regions. This is why the country became the "Union of Myanmar", to show its emancipation from the British colonial heritage. The junta affirmed the term “Myanmar” could include all minorities in opposition to the term “Burma”, referring to the dominant ethnic group, the Burmans (or Bamar). The term “Union” was used to underline the unity of the country, and its population, particularly valued by the Army. Several members of the international community refused to consider this new name as legitimate, in order to show their opposition to the former dictatorship, which had just violently dampened the students riots for democracy. While France kept the name "Birmanie" for linguistic and cultural reasons, Great Britain and the USA kept “Burman” for political concerns.
In the context of the One Myanmar project, we decided to use the name "Myanmar" for the country, and "Yangon" for the former capital “Rangoon” – after 1989.
The word "Burmese" qualifies Myanmar’s inhabitants, when "Bamar" is referring to the members of the main ethnic group. For the names of ethnic groups, we strive to use the most commonly used names. In the same way than Claude Levi-Strauss did, we choose to make ethnic groups names invariables, whether they qualify an inhabitant or they are nominalized.
The Strand Hotel built in Rangoon in 1896
is stillafamous hotel of Yangon today.
၂၀၁၅ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအားမြန်မာနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီအသွင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်နောက်ဆုံးစမ်းသပ်ချက်အဖြစ်လူ များကယူဆနေကြပါသည်။ ပြီးခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွင်ပြောင်းလဲမှုများစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မီဒီယာအားစိစစ်တည်းဖြတ်မှုကိုဆိုင်းငံ့ပေးထားခဲ့ခြင်း၊ ပါတီစုံစနစ်ကိုပြန်လည်ရရှိလာခြင်း နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား များလွှတ်ပေးခြင်းတို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာအလွန်လျှင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါ သည်။
ဤရွေးကောက်ပွဲတွင်ဗြိတိန်နိုင်ငံမှပေါ်ထွက်လာသော မဲအများဆုံးရရှိသူအနိုင်ရသည့် “First-past-the-post” စနစ် ဖြစ်သော uninominal voting စနစ်ကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤစနစ်တွင်မဲအများဆုံးရရှိသောကိုယ်စားလှယ် လောင်းအားရွေးကောက်တင်မြှောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤဥပဒေပြုရွေးကောက်ပွဲမှ အထက်လွှတ်တော်(အမျိုးသား လွှတ်တော်) အတွက်တပ်မတော်သားမဟုတ်သည့်အထက်လွှတ်တော်အမတ် ၁၆၈ ဦး၊ အောက်လွှတ်တော် (ပြည်သူ့ လွှတ်တော်) အတွက်တပ်မတော်သားမဟုတ်သည့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၃၃၀ ဦးအပါအ၀င်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို ၅ နှစ်သက်တမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက်ရွေးကောက်တင်မြှောက် မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တပ်မ တော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့သုံးဖွဲ့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထား သော သမ္မတရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့က အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လျှင်ဒုတိယသမ္မတတစ်ဦးစီကိုချယ်တင်မြှောက်ပြီးလျှင်ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးပါဝင်သော သမ္မတရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့က သမ္မတကိုရွေးချယ်တင် မြှောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော်လည်း ၂၀၀၈ ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေအရ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင်တပ်မတော်သည်လွှတ်တော်ကိုယ်စား အရေအတွက်၏ လေးပုံတစ်ပုံကိုရယူထားပြီး၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အရေအတွက်၏သုံးပုံတစ်ပုံကိုရယူထားပါသည်။ ထို့ကြောင့်တပ်မတော်သည် နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်း နှင့် လွှတ်တော်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ကြီးမားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
မြောက်မြားစွာသောပါတီများကိုကိုယ်စားပြုသည့် များပြားသောအရေအတွက်ဖြစ်သည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၆၀၀၀ ကျော်မှာရွေးကောက်ပွဲတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်မှတ်ပုံတင်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်၎င်း၏သြဇာအာဏာတည်တံ့ ခိုင်မြဲရန်အတွက်မျက်နှာပျက်ရမည့်အဖြစ်မျိုးမဖြစ်ပေါ်စေရန်မျှော်လင့်ထားသည့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီနှင့်ကျော်ကြားထင်ရှားသောဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီစသည့်အ တိုက်အခံပါတီနှစ်ခုမှသာမဲအများဆုံးရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခင်အာဏာရှင်စစ်အစိုးရ၏အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းများဖြစ်ကြသည့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီခေါင်းဆောင် များ သည်၎င်းတို့၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုတွင်၎င်းတို့၏ပုံရိပ်ကိုမြှင့်တင်နိုင်ရန်မ ကြာသေးမီကဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကိုအသုံးချရန်ဆုံးဖြတ်မည်မှာသေချာလျက်ရှိပါသည်။ အခြားတစ်ဖက် တွင်မူအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှာမဲများများရရန်ရေပန်းစားလျက်ရှိပါသည်။ သို့သော်ငြားလည်း ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်မှာ လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည့်တိုင် ပြည်ပနိုင်ငံတွင်ဆွေမျိုးများရှိနေ သည့်အတွက်တည်ဆဲဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေအရ သမ္မတဖြစ်လာနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ဤပါတီကြီးနှစ်ခု၏လွန်ဆွဲပွဲအပြင် တိုင်းရင်းသားပါတီများဟုရည်ညွှန်းလေ့ရှိသော ဒေသခံပါတီအားရွေးချယ်နိုင်ပါ သည်။ ၎င်းတိုင်းရင်းသားပါတီများသည် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပါတီ ၉၃ ခု၏သုံးပုံနှစ်ပုံနီးပါးမျှရှိပြီး ထိုပါတီများ၏ရည် ရွယ်ချက်မှာ လူနည်းစုအုပ်စုများကဒေသတွင်းတွင်လွှမ်းမိုးနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏အဓိကကျသောခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည့်ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလတွင် မြန်မာလူမျိုးများ၏ မျှော်လင့် ချက်များ၊ ကြောက်ရွံ့မှုများနှင့် သံသယများအား ပြောင်းလဲခြင်းသံစဉ်များမှခြယ်မှုန်းဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အာဏာရှင်စစ်အစိုးရမှရာစုနှစ်တစ်ဝက်ကျော်ကြာအောင်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင်လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှစ၍တစ်ခါမျှကြုံတွေ့ဖူးခြင်းမရှိသောနိုင်ငံငံရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုများ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။ ပထမဆုံးသောအရပ်သားတစ်ပိုင်းအစိုးရသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မတ်လတွင်စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍သ မိုင်းတွင်အရှည်ကြာဆုံးဖြစ်သောနှစ် ၆၀ ကျော်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေသည့်နိုင်ငံအားငြိမ်းချမ်းစေရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး အလွန်ရှေး ကျနေသောစနစ်ကိုအစဉ်အဆက်ကျင့်သုံးခဲ့သည့်နိုင်ငံတွင်စီပွားရေးတံခါးဖွင့်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်နောင်လာမည့်နှစ်များသည် မြန်မာ့မြေတွင် နိုင်ငံရေးအရသာမကစီးပွားရေးအရပါအသွင်းကူးပြောင်းရာတွင်အဆုံးအဖြတ်ပေးမည့်နှစ်များဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပါ သည်။ ရေရှည်အတွက်ဆိုလျှင်လွတ်လပ်ရေးရရှိသည့်အချိန်မှစတင်၍မုန်တိုင်းထန်ခဲ့သောမြန်မာနိုင်ငံ၏သမိုင်းကြောင်းက ၂၀၁၅ ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာသောမျှော်လင့်ချက်များအကြောင်းရှင်းပြနိုင်ပါလိမ့်မည်။
General Aung San in the 40's
၁၈၈၆ ခုနှစ်မှစတင်၍မြန်မာ့နယ်မြေအများစုမှာဗြိတိသျှလက်အောက်သို့ကျရောက်ခဲ့ပါသည်။ ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးသည်ယခင်ရှိ ခဲ့သည့်နိုင်ငံအုပ်ချုပ်မှုပုံစံကိုဖျက်ပစ်ပြီး မြန်မာလူမျိုးများထက်ပို၍သစ္စာရှိသည်ဟုယူဆရသော တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများကို အားထားလာခဲ့ပါသည်။ ကိုလိုနီစနစ်လက်အောက်မှရုန်းထွက်ရခြင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ခါးသီးလှပါသည်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင် ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံကို စတင်တည်ထောင်သူနှင့်နိုင်ငံ၏သူရဲကောင်းဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဖြစ်လာမည့်သူသည်တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရရှိနိုင် ရန်အတွက်ရဲဘော်သုံးကျိပ်နှင့်အတူဂျပန်စစ်တပ်များချဉ်းနင်းဝင်ရောက်ရာတွင်ပါဝင်လာခဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက်နေ့တွင်တိုင်းပြည်ကိုတစ်နှစ်အတွင်းလွတ်လပ်ရေးပေးမည့်စီမံချက်ပါရှိသည့် အောင်ဆန်းအက်တလီစာချုပ်ကို မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ မြန်မာခေါင်းဆောင်များအပါအ၀င်ဗြိတိသျှခေါင်းဆောင်များ၏အဓိကတာဝန်မှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများပြားစွာစုပေါင်းနေထိုင် လျှက်ရှိသောမြန်မာနိုင်ငံအားနဂိုအတိုင်းစည်းလုံးစွာဆက်လက်တည်ရှိနေစေရေးဖြစ်ပါသည်။ ထိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏သ မိုင်းကြောင်းတွင် မိမိလက်အောက်သို့ရောက်အောင်သွတ်သွင်းခြင်းတို့မရှိခဲ့ဘဲ ရှုပ်ထွေးသောမဟာမိတ်ပြုမှုများနှင့်ပဋိပက္ခဖြစ် ပွားမှုများရှိနေခဲ့ပါသည်။
မကြာမီမှာပင်ရှမ်းပြည်နယ်၏မြို့ငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်သော ပင်လုံမြို့တွင်ဆွေးနွေးပွဲကိုစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲ တွင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၏ကိုယ်စားလှယ်များစုဝေးပါဝင်ခဲ့ကြပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ကျော်ကြားသောစကားဖြစ်သည့် “မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်ကတစ်ကျပ်ရတယ်ဆိုရင်သင်လည်းဘဲတစ်ကျပ်ရလိမ့်မယ်” ဆိုသည့်စကားအရမြန်မာပြည်သူများ ၏သာတူညီမျှရှိမှုအတွက်တရားဝင်လက်ခံသည့်သဘောတူညီချက်ကိုရရှိခဲ့ပါသည်။ ယနေ့တိုင်အောင်ပင်လူနည်းစုတိုင်းရင်း သားလူမျိုးများ၏နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်များမှာထိုသဘောတူညီချက်အပေါ်တွင်အခြေပြုထားပါသည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလုပ်ကြံခံရပါသည်။ လွတ်လပ်ရေးသူရဲကောင်းဖြစ်သောဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းသည် သူ့လုပ်ဆောင်ချက်များ၏အောင်မြင်မှုများကိုမတွေ့ခဲ့ရရှာပါ။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပါသည်။ ဦးနုသည် များစွာသောပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများကိုအထူး အခွင့်အရေးများပေးထားသည့်ဖက်ဒရယ်လွှတ်တော်စနစ်၏၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်နှင့်ကရင် နီပြည်နယ်များသည် ၁၀ နှစ်ကာလပြီးဆုံးလျှင်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု၏အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှနှုတ်ထွက်ခွင့်ကိုသီအိုရီအရ ရရှိကြပါ သည်။ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး နှင့် တိုင်းရင်းသားများ၏တောင်းဆိုမှုများကိုနောက်ခံထားပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးသည့်နောက်ကျွမ်း ကျင်မှုမရှိဘဲစီမံအုပ်ချုပ်ခဲ့သောကြောင့် လွတ်လပ်ရေးရရှိသည့်ပထမနှစ်မှာပင် ပြဿနာရပ်များဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးကစဉ့်ကလျား ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ လွှတ်တော်စနစ်သည် မတူကွဲပြားသောအကျိုးစီးပွားများအတွက် ကျေနပ်ဖွယ်ရာမဖြစ်ခဲ့ဘဲ မကြာမီမှာပင်တိုင်း ပြည်ကိုတစ်စစီပြိုကွဲစေမည့်ပြည်တွင်းစစ်စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံအနှံ့မလုံခြုံမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးမြန်မာ့တပ်မတော်သည် ဗဟိုအစိုးရအား တစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့ဆန့်ကျင်ခဲ့သော မွန်၊ရှမ်း၊ကရင်နှင့်ကချင်သူပုန်များကိုထိန်းချုပ်ရန်ခက်ခဲခဲ့ပါသည်။ လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း ၆၀ အတွင်းနိုင်ငံ၏စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာများအားစိစစ်အကဲဖြတ်မှုရ လဒ်များမှာထိတ်လန့်ဖွယ်ရာဖြစ်ပါသည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင်အရပ်သားအစိုးရအားအဓမ္မဖယ်ရှား၍တပ်မတော်မှအာဏာသိမ်းခဲ့ပါသည်။ ရဲဘော်သုံးကျိပ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီးဗိုလ် ချုပ်အောင်ဆန်း၏မိတ်ဆွေဟောင်းလည်းဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ဆိုရှယ်လစ်မူဝါဒများရောနှောထားသည့် အများနှင့်မတူသောဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဖြစ်သည့် “မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်” ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။ တိုင်းပြည်ထူ ထောင်ရာတွင်အဓိကဆောင်ရွက်သည့်တပ်မတော်သည် အဖြေရှာရန်လိုအပ်နေသည့်တိုင်းရင်းသားများပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင် ခြင်းမရှိဘဲအဓမ္မလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် တပ်မတော်အားအများကမနှစ်သက်သည့်အဖြစ်ကိုပိုမိုဆိုးဝါးလာစေခဲ့ပါသည်။
တိုင်းပြည်ကိုကိုယ်စားပြုသည့်အမှတ်အသား - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
Aung San Suu Kyi gives speech to her supporters on the 17th of january 2012.
၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောအရေးအခင်းကဦးနေ၀င်းကိုရာထူးမှနှုတ်ထွက်သွားစေသည်။ “နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည် ဆောက်ရေးအဖွဲ့” ဟုခေါ်သောအာဏာရှင်စစ်အစိုးရမှအာဏာရလာသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏သမီးဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်သည်မြန်မာနိုင်ငံသို့အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေစဉ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအားလူထုမှဆန့်ကျင်သည့်အရေးအခင်းဖြစ်ပေါ်နေချိန် ဖြစ်ပြီးထိုအချိန်မှစတင်၍နိုင်ငံရေးလောကအတွင်းဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ (ထိုအချိန်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်သူမ၏ခင် ပွန်းနှင့်အတူလန်ဒန်တွင်နေထိုင်လျှက်ရှိပါသည်။)။ မကြာမီမှာပင်သူမသည်တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်ဒီမိုကရေစီမျှော်လင့်ချက်ကို ရုပ်လုံးပေါ်စေခဲ့ပါသည်။ အာဏာရှင်စစ်အစိုးရသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးရန်လက်ခံခဲ့သော် လည်းရလဒ်များကိုတရားဝင်အတည်ပြုရန်ငြင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဖြစ်လာသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီသည် စင်စစ်တွင်မဲအများစုကိုရရှိခဲ့ပြီး လွှတ်တော်၏ ၈၀% သောနေရာများကိုရရှိခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှစတင်၍နေအိမ်တွင်အကျယ်ချုပ်ချထားခြင်းခံခဲ့ရပြီး ထိုနေအိမ်အကျယ် ချုပ်တွင်ယာယီလွှတ်ပေးသည့်အချိန်အထိ ၆ နှစ်ကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ရပါသည်။ ရန်ကုန်ရှိသူမ၏နေအိမ်တွင်နေထိုင်နေစဉ်အ တွင်း ရွေးကောက်ပွဲတွင်မဲအများဆုံးအနိုင်ရရှိခြင်းနှင့် နိုဘယ်ဆုရရှိခြင်း(၁၉၉၁) တို့ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ သို့သော်မြန်နိုင်ငံသည်၎င်း၏အထီးကျန်နေတတ်သည့်အလေ့အကျင့်မှတစ်ဖြေးဖြေးတစ်စစတိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်မြန်မာနိုင်ငံသည်ဒေသတွင်းနိုင်ငံများနှင့်ဆက်ဆံရေးပိုမိုအားကောင်းလာခဲ့ပြီး အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ အာဏာရှင်စစ်အစိုးရမှ၎င်း၏ပုံရိပ်ကိုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် “နိုင်ငံတော်အေး ချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ” ဟုအမည်ပြောင်းခဲ့ပါသည်။ သို့သော်ငြားလည်း နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံများကိုစနစ်တကျ ချေမှုန်း၍ထောင်ချခဲ့ပြီး လူထုအားနိုင်ငံတော်မှအချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်ဦးခင်ညွန့်အားဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး ဦးခင်ညွန့်ကသူ၏ ဒီမိုကရေစီသို့အဆင့် ၇ ဆင့်ဖြင့်ကူးပြောင်း သောစီမံချက်ဖြစ်သည့် “စည်းကမ်းပြည့်ဝသောဒီမိုကရေစီလမ်းပြမြေပုံ” ကိုကြေငြာခဲ့ပါသည်။ ထိုအတောအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံ သည်တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတံခါးဖွင့်ဝါဒကိုကျင့်သုံးလာပါသည်။ တစစနှင့်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးသို့အင်တာနက်ဖြန့်ကျက်လာသည့်အ တွက်ပြင်ပကမ္ဘာမှသတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုတိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။
Monks protesting in Yangon during the Saffron revolution in 2007.
၂၀၀၇ ခုနှစ်သည် “ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး” ဟုနောက်ပိုင်းတွင်ခေါ်တွင်ခဲ့သောလူထုဆန္ဒပြပွဲများကြောင့်ထင်ရှားခဲ့ပြီး ထိုဆန္ဒပြပွဲများ၏နောက်ပိုင်းတွင်ဈေးနှုန်းများရုတ်တရက်မြင့်တက်သွားခဲ့ပါသည်။ စစ်တပ်၏အကြမ်းဖက်ခြင်းမခံရအောင်ထိုအ ချိန်အထိကာကွယ်ပေးထားခြင်းခံရသောဗုဒ္ဓရဟန်းတော်များသည်လမ်းများပေါ်သို့ထွက်လာကြပြီး ထိုရဟန်းတော်များကိုလူထု ဆန္ဒပြပွဲတွင်ပါဝင်သူများကဘေးမှဝန်းရံကာကွယ်ပေးကြပါသည်။ နောက်တစ်နှစ်တွင် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းဒေသမှာအကြီးအကျယ်ပျက်စီးခဲ့ပြီး အနည်းဆုံးလူပေါင်း ၁၃၈,၀၀၀ သေဆုံးခဲ့ပါသည်။ ထိုသဘာဝဘေးအန္တ ရာယ်ကြီးသည် နိုင်ငံတော်၏ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းအသစ်အတွင်းတပ်မတော်၏ကဏ္ဍကိုလုံခြုံစိတ်ချရစေရန်ကာကွယ်ပေး ထားသည့်အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလက်ခံအတည်ပြုမည့် ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲမတိုင်မီကလေးတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ “လမ်းပြမြေပုံ” ၏အဆင့် ၇ ဆင့်တွင်အဆင့် ၅ ဖြစ်သော ၂၀၁၀ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက် နိုင်ငံ၏အထိမ်းအမှတ်လက္ခဏာဖြစ်သောဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ သမ္မတသစ်ဦးသိန်းစိန်သည် ၂၀၁၁ ခု နှစ်မတ်လတွင်ရာထူးကိုလက်ခံယူခဲ့ပါသည်။ ရာထူးရယူအပြီးမကြာမီတွင်သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးခြင်းနှင့်အဓိကကျသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲရေးသဘောတူညီချက်တို့ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင်လွှတ်တော်အသစ်သည် လွတ်လပ်စွာရေးသားပြောဆိုခွင့်နှင့် နိုင်ငံ ခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတို့ကိုခွင့်ပြုပေးထားသည့် ပြုပြင်ထားသောဥပဒေရေးရာမူဘောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ၂၀၁၂ ခု နှစ်ဧပြီလတွင် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အတူပါတီဝင် ၄၁ ဦးတို့သည်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး ထိုနည်းဖြင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၏သာတူ ညီမျှမှုမရှိသောအတိုင်းအတာကိုသက်သေပြခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာတပ်မတော်၏သြဇာအာဏာလွှမ်းမိုး မှုအောက်တွင်တည်ရှိနေသေးသော်လည်း ကဏ္ဍများစွာတွင်အကူးအပြောင်းများစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။
Thein Sein and the american president Barack Obama at Yangon on the 19th of november 2012.
ONE MYANMAR စီမံကိန်း
အာဏာရှင်စစ်အစိုးရမှ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကြာအောင်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံသည်ဒီမိုကရေစီခရီးလမ်းကိုချီတက်နေပြီဖြစ်ပါသည်..........
ONE MYANMAR မြန်မာနိုင်ငံအားစိတ်ဝင်စားမှုအသစ်ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အချိန်တွင်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးသည့်အချိန်မှစ၍ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နိုင်ငံရေးအသွင်ပြောင်းလဲမှုစပ်ကူးမတ်ကူးကာ လအား ၄ နှစ်ကြုံတွေ့ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။၂၀၁၅ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအား မြန်မာနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူး ပြောင်းမှုကာလအတွက်နောက်ဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ်ယူဆရသောကြောင့် ONE MYANMAR မြန်မာနိုင်ငံရှိအမှန်တစ်ကယ် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့်အားလုံးသောနောက်ခံအတွင်းရေးအကြောင်းအရာများကိုအထောက်အထားဖြင့်ချယ်မှုန်းဖော်ပြ မည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအချိန်တွင်မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုသည်မှာမည်သည့်အဓိပ္ပါယ်ကိုဖော်ဆောင်ပါသနည်း? နိုင်ငံတကာသတင်းစာမဂ္ဂဇင်း များတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရှုရသောထူးဆန်းပြီးတစ်ခါတစ်ရံအသံထွက်ကိုမဖတ်နိုင်သည့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမှာမည်သူ များဖြစ်ပါသနည်း? နိုင်ငံရေးအသွင်ကူးပြောင်းခြင်းဆိုသည်မှာ၎င်းတို့အတွက်မည်သည့်အဓိပ္ပါယ်ကိုဖော်ဆောင်ပါသ နည်း? နိုင်ငံအတွင်းတွင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသောနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲများအားလူတိုင်းကစစ်မှန်သောဒီမိုကရေ စီအသွင်ပြောင်းလဲရေးအဖြစ်ရှုမြင်ပါသလား?
ONE MYANMAR offers :
ONE MYANMAR ပြီးပြည့်စုံစွာရုပ်လုံးဖော်ခံစားကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်တင်ဆက်ပုံကဏ္ဍ ၃ မျိုးဖြင့်ချယ်မှုန်းတင်ဆက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အသွင်းကူးပြောင်းရေးကိုဖော်ဆောင်နေသူ ၁၀ ဦးနှင့် ပြောင်းလဲခြင်း၏ သက်ရောက်မှုကိုခံယူရသည့် မြန်မာ ၁၀ ဦးတို့ ၏အသေးစိတ်အကြောင်းအရာများမှတစ်ဆင့် ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလရှိနိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးအခြေအနေတို့ ကိုခြုံငုံသုံးသပ်ထားသည့်ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းများကိုတင်ဆက်ပြသခြင်း။
One မြန်မာ - အသွင်ကူးပြောင်းခြင်း၏မျက်နှာစာများ
မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်သည့် မြန်မာပြည်သူများ၏တပေါင်းတစည်းတည်းဖြစ်ခြင်း နှင့် ကွဲပြားခြားနားသည့်ယဉ်ကျေးမှုဓ လေ့ထုံးစံများ နှင့်ပတ်သက်၍သရုပ်မှန်ကိုပေါ်လွင်စေသည့် လှပသောဓါတ်ပုံများကိုတင်ဆက်ပြသခြင်း။
တပေါင်းတစည်းတည်းဖြစ်ခြင်းနှင့်မတူကွဲပြားခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံ၏အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလရှိစိန်ခေါ်မှုများ
The Embassy of France in Myanmar supports civil society organizations involved in the preparation of 2015 general elections. The projects have been selected in the field of voter education, media capacity and election monitoring, withastrong focus on gender and marginalized population’s inclusion .
• Green Peasant Institute This Civil society organization from the southern region of Myanmar (Irrawaddy) organizes 20 trainings on Civic & Voter education to farmers and fishermen from July to October, in order to raise their awareness on their political rights few weeks before crucial elections.
• Generation Tree This young women based Civil society organization managed 15 voter education trainings in the region of Mandalay and in Mon and Shan States. Its enthousiasm and its dynamism allowed it to not only sensitize many citizens on elections' stakes, but also to ease the dialgue between communities and local authorities.
• Myanmar Centre for Inclusive Development Association dedicated to the promotion of disable people's rights, MCID is leadingastudy on the access to the electoral process, sentizes key stakeholders (politcal parties and medias) to the issue of accessibility via voter education training and is producingashort advocacy film on disable people's access to elections.
• Kan Baw Zar Youth Library Civil society organization and library, KBZ Youth has been travelling around the Shan State from July to September, calling for citizens to check the voter lists and organizing voter education trainings where it is most needed, in remote areas.
• Community Agency for rural Development Thanks to this civil society organization based in the remote Chin State, in the North-west of the country, ethnic population extremely isolated from 45 villages access to voter education trainings, before decisive elections.
• Media for Community This association has organized two journalist trainings withafocus on elections to ethnic women from Chin State, North-west Myanmar. This projects is not only an opportunity for the beneficiaries to develop their skills, it's alsoaway to facilitate the diffusion of information from isolated areas.
• Myanmar Network for Free and Fair Elections Asayoung civil society organization, MYNFREL rapidly becameakey stakeholder in elections related matters, and is now managingamedia monitoring project for elections throughoutasystematic analysis of national media (TV, radio and newspaper).
• Humanity Institute Formed in 2012 byayouth group from Kachin State (Nothern part of Myanmar), Humanity Institute gathers todayaUniversity,amonthly magazine (the "Kachin Times") andavery active NGO. The later ensures long term observation of elections in Kachin State, including media monitoring and D-Day observation. Furthermore, they organized4political debates, unique in this country in transition.
• Generation Wave Those young activists decided to involve in election's observation. They will cover Bago's region, central Myanmar, with more thanahundred of observers - half of them being women - on election's day, coming 8th of November.
• Shwe Myitmakka Media Group This local news agency launchedabi-monthly magazine dedicated to elections in ethnic States of the country. Thus in every state the magazine "Our choice" is distributed, with information on voter educatoin and on political parties from the concerned state.
• Centre for Youth and Social Harmony This youth group is going to launchamobile application on civic education, "I Myanmar citizen", few days ahead of the elections, with not only information on history, geography and the Constitution of Myanmar, but also withaquiz on civic education and an interaction module with members of the Parliament.
• The Irrawaddy Magazine As one of the main magazine and website for news in Myanmar, The Irrawaddy has set upaspecific plan for election's covering since July, includingaspecial page on its website.
A web documentary by Carine Jaquet and Mikaël Ferloni
Produced by MkF éditions
Chief operator and videos:
Alice Desplats, assisted by Rodolphe Chauvin
Alice Desplats and Mikael Ferloni
Graphic creation, webdesign and integration :
Logo and One Myanmar font :
Translation and English subtitles :
Translation and Burmese subtitles :
Millions of thanks to Saya Renaud for sharing his knowledge from Myitkyina, to Naypyitaw; to Maël and Romain for their enthusiasm and their useful comments; to Michel Baumgartner for his rigorous corrections on spelling and style, very useful when you are typing withaQWERTY keyboard; to Thusitha Perera for his attentive proof reading; to Pyae Sone and Min Taw for their kindness, good mood and help at any time ; to Jessica and Max for their hospitality ; and eventually to our friends who believed, followed and contributed to One Myanmar’s adventure !
The comments of the interviewees contained in this documentary only represent the opinion of their authors and do not commit the directors of the documentary in any way.
All the information broadcast on the website “one-myanman.com” is the property of MkF editions. More generally, MkF editions can neither guaranty the quality and the compatibility of the website foraspecific use, nor the fact that the website is comprehensive or free of any mistake. Users are responsible for their use of the website, in accordance with the regulations in force (Law n°78-17 of January 6th, 1978, relating to data processing , filing and civil liberties, called “Loi Informatique et Liberté”).
The website one-myanmar isapublication of :
“E.U.R.L.” egistered at the Commercial Register of Paris under the number 508 136 504, withacapital of 1 000 Euros.
ntra-community VAT : FR10508136504
Headquarters : 1, rue Maison Dieu, 75014 Paris – France
All reproduction rights are copyright for organizations and legal successors.
One-myanmar.com is hosted by:
စီးပွားရေးဆိုင်ရာစပ်ကူးမတ်ကူးကာလ ဘာသာရေး အသွင်ကူးပြောင်းမှု ခြုံငုံ၍ကြည့်သောမြင်ကွင်း လွတ်လပ်စွာပြောဆိုရေးသားခွင့် ရွေးကောက်ပွဲ မြန်မာနိုင်ငံ၏ပုံရိပ History The project toponymy Electoral context Geography